तालिमपछि काम पाउने सम्भावना पनि शतप्रतिशत रहन्छ ।
इन्जिनियर्स नेपाल | माघ २८, २०७६, काठमाडौं
मेरोघर डटकमसँगको सहकार्यमा इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका विद्यार्थीसँग हातेमालो गर्न दक्षता डटकम नामक कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
विद्यार्थीहरु उद्योगमा छिर्नुअघि एउटा स्तरको ज्ञान प्रदान गर्ने काम दक्षताले गर्छ । दक्षताले विद्यार्थीलाई ज्ञानमात्र होइन कामसमेत दिने गर्छ ।
पढाइको आधारमा भोलि विद्यार्थी फिल्डमा काम गर्न परिपक्व हुँदैनन् । त्यसका लागि दक्षताले व्यावहारिक रुपमै विद्यार्थीलाई कामका लागि सक्षम बन्ने आधार तयार गरिदिन्छ ।
दक्षताका कार्यक्रम प्रमुख महेश तिमल्सिना भन्छन्, ‘इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेको कुनै विद्यार्थीले कलेजमा पाउने भनेको सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र हो । हामी उसलाई फास्ट ट्र्याकबाट तालिम दिन्छौँ र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्छौँ ।’ यसरी तालिममा विद्यार्थीले दक्षतालाई क्लाइन्टले दिएका कामहरु गर्ने अवसर पाउँछन् ।
तालिमपछि निखारिएका विद्यार्थीले दक्षतासँग सहकार्य गर्दै आफूले जानेको सीपको आधारमा कामहरु पाउँछन् । कामसँगै पैसा पनि कमाउँछन् ।
आम्दानीसँगै आफूले सिकेका कुराहरु पढाइपछि उद्योगमा छिर्दा अनुभवको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यतिबेलासम्म आत्मविश्वास र क्षमताको पनि विकास भइसकेको हुन्छ ।
यसबाहेक दक्षताले स्ट्रक्चर एनालाइज, ड्रइङ गर्ने मार्केट एक्स्पर्टहरुलाई फ्रील्यान्सीङ जागिर अफर पनि गर्छ । दक्षताका लागि कम्पनीहरुबाट आएका कामहरु उनीहरुलाई दिएर कमिसन दिइन्छ ।
काम लिने र दिने
विद्यार्थीहरुलाई तालिमका दौरान स्टिमेसन, सर्भे, बिल्डिङ ले–आउट तथा प्लानिङ, स्ट्रक्चर एनालाइज, डिजाइन गर्न र थ्रीडी बनाउन दिइन्छ । अनुभवी शिक्षकद्वारा कक्षा लिइन्छ र गल्ती सुधार्ने अवसरसमेत उनीहरुले प्राप्त गर्छन् । सँगै क्लाइन्टको काम गरेर पैसा कमाउने पाटो त छँदै छ ।
इन्जिनियरिङ क्षेत्रका जस्तोसुकै कामहरु लिनु र ती काम गर्ने अवसर विद्यार्थीको क्षमताको आधारमा उनीहरुलाई दिनु दक्षताको मुख्य उद्देश्य हो । दक्षताले कुनै कम्पनी, उद्योग, कन्सल्टेन्सी तथा इन्जिनियरका पनि इन्जिनियरिङसम्बन्धी हरेक काम गरिदिन्छ ।
नेपालभित्रका कामबाट सुरुवात गरेर भविष्यमा विदेशका कामहरु पनि स्वतन्त्ररुपमा गर्ने दक्षताको उद्देश्य छ । तिमल्सिना भन्छन्, ‘युरोपमा चलिरहेको फ्रिलेन्सिङभन्दा सस्तो मूल्यमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने उनीहरु भोलि हामीकहाँ आउँछन् । त्यसतर्फ पनि हामीले सोचिरहेका छौँ ।’
तालिमपछि काम र क्षमता जाँच
दक्षतासँग सामाजिक सञ्जालमार्फत इन्जिनियरहरु जोडिन सक्नेछन् । त्यसबाहेक साथीभाइको चिनजानका आधारमा काम भइरहेको छ ।
यसरी सिक्ने र सिकाउने मन र क्षमता भएकाहरु दक्षतासँग जोडिँदै गइरहेका छन् । सुरुवाती दिन भएकाले यसका संरचनाहरु बन्दै छन् । एप र वेबसाइटमा काम भइरहेको छ ।
तालिम लिएकाहरुको पनि स्तर निर्धारण गर्ने र सोहीअनुसार काम प्रदान दिने कार्य पनि दक्षताले गर्दै छ । एउटा विद्यार्थीले एनालाइसिसको तालिम लिइसकेपछि दक्षताले दुई वा तीनवटा काम गराउँछ । कामबाट उसको क्षमता जाँच गरिन्छ । त्यसको आधारमा उसको दर्जा निर्धारण हुन्छ ।
कलेजमा लिइने परीक्षाजस्तै उसको रेटिङ हुन्छ । त्यसकै आधारमा उसको एपमा प्रोफाइल बन्छ र काम दिइन्छ । उसलाई दिइएको काम उसको नोटिफिकेसनमा गएर बस्छ ।
गर्नुपर्ने कामको सबै जानकारी त्यहीँ दिइएको हुन्छ । यदि कामप्रति उसले रुचि राख्यो भने एउटा स्टिमेट बनाएर ड्राफ्ट पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
साथै, सो काम उसले कति पैसामा गर्ने हो त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्षताले विभिन्न इन्जिनियरबाट आएका यस्ता स्टिमेटको अध्ययन गर्छ । त्यसपछि इन्जिनियर छनोट गरिन्छ । काम दिएपछि समय तोकिन्छ ।
कामको आधारमा उसको रेटिङमा फेरि तलमाथि गरिन्छ । विद्यार्थीबाहेक सरकारी वा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले पनि रुचिमा आधारमा दक्षतासँग समन्वयम गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
पढाइ र बजारको ग्याप हटाउने प्रयास
कलेजले के पढाइरहेको छ र त्यसमा के थप्न सकिन्छ भन्ने आधारमा दक्षताले तालिमहरु प्रदान गर्छ । त्यो पनि फास्ट ट्र्याकबाट । ६ दिनको कोर्स हुन्छ ।
कुनै विद्यार्थीले बिल्डिङ स्टिमेटको तालिम लिएको छ भने उसले तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम पछि उसले कामबाट कटाउन पनि सक्छ । तालिमपछि काम पाउने सम्भावना पनि शतप्रतिशत रहन्छ ।
दक्षताले नेपालभरबाट आउने जुनसुकै काम गर्छ । हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि ताप्लेजुङबाट कुनै काम आएको छ भने अनलाइनबाटै सो काम रेटिङ भएका तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई प्रदान गरिन्छ । काम सकिएपछि अनलाइनबाटै डाटा ताप्लेजुङ पठाइन्छ ।
हाल दक्षता भवनसँग सम्बन्धित कामहरुमा बढी फोकस छ । बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनसम्बन्धी जस्तोसुकै कामका लागि दक्षता तयार भइसकेको छ । तत्काल बाटोको काम पनि सुरु हुँदै छ । सर्भे, प्लानिङ र आर्किटेक्टका कामहरु पनि भइरहेका छन् ।
संयोजक तिमल्सिना भन्छन्, ‘नेपालमा इन्टर्नशिपको क्षेत्रमा मान्छेहरु छैनन् । पढाइ एउटा भइरहेको छ तर बजारले अर्कै कुरा माग गरिरहेको छ ।
हामी यी दुईबीचमा रहेको ग्याप हटाउन आएका हौँ ।’ अर्थात्, दक्षताले इन्जिनियरलाई उनीहरुको भूमिका, कर्तव्य र कामको बारेमा बुझाउने र रोजगारी दिने कामसमेत गर्छ ।
Feb. 14, 2020, 5:14 p.m.
im regular follower of this online magazine. I want to join the Dakshata training course. and want to know about the full details about it. please mention any contact way for this. thank you.
I agree with you engineers nepal family.
Feb. 12, 2020, 7:38 p.m.
Kaile dekhi suru ho?
Feb. 12, 2020, 6:56 p.m.
How can we take this training and where is this office located at??
Better to keep confidential
Daxata batai training liyeko thiye maile.. Kam sikaune test line ra kam dine vaneko vaye pani kam sikaiyo tara kunai test pani linu vayena ra kam ko kura ta tadha ko vayo..
Feb. 12, 2020, 12:19 p.m.
I want to take part in this new दक्षता डटकम programme...want to know the procedure for this training...